Ny tantara an-tsary an-tsary an'ilay mpanao sary Alexander Jansson | Famoronana an-tserasera
Miresaka betsaka momba ny hosodoko nomerika sy ireo mpanakanto rehetra manana Photoshop sy programa famolavolana hafa toa izahay fitaovana ilaina hitondra endrika fanehoan-kevitra hafa ho antsika.
Teknika sasany izay mandeha lavitra kokoa rehefa mifangaro amin'izay mety ho fampifandraisana eo amin'ny photomanipulation na ny borosy niomerika izay mampiasa firafitra samihafa handrafetana endrika na kapoka isan-karazany. Teknika mifangaro izay hitantsika amin'ny asan'i Alexander Jansson, mpahay sary Suède izay miantso ny tenany ho "karazana mpanakanto".
Alexander Jansson dia fanoharana izay mampiasa teknika samihafaAnimator 2D / 3D izy ary karazana siantista. Tsy manana fampahalalana bebe kokoa momba an'ity farany ity aho, noho izany dia avelantsika amina karazana halo tsy fantatra, indrindra rehefa avy nahita ny asany lehibe izay nalaina avy amin'ny iray amin'ireo takelaka tsara kalitao ireo ny karazan-tantara rehetra.
Ity teknika mifangaro ity dia mitondra antsika amin'ny famaranana lehibe sy fivoarana lehibe ao amin'izy ireo araka ny ahitanao azy ilay fawn izay mijery mahitsy eo alohany ho an'izay mpijery izay eo amin'ny "rindrina fahefatra", na ilay soavaly mitaingina zavaboary hafahafa isan-karazany izay ananan'ny tontolon'ny zavamaniry kokoa noho ilay haintsika.
Tantara angano ao amin'i Jansson arotsaho ny eritreritrao rehetra hitondra ny trano eo an-tsorokay izay entin'ity toetra hafahafa ity ary afaka manaisotra ireo endri-tsoratra manokana ireo Tim Burton ary toa avy amin'ny iray amin'ireo sarimihetsika mihetsika ilay izy.
Jansson dia manan-talenta amin'ny fampifangaroana teknika sy ny famolavolana toetra ary koa izany tontolo rehetra manodidina azy ireo izany. Azonao atao ny manaraka ny asany avy amin'ny tranokalany manokana alexanderjansson.com hahitana bebe kokoa ny sangan'asany ankoatr'ireo zavatra zarainay amin'ity sehatra virtoaly ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Haino aman-jery mifangaro ho an'ny tantara majika nataon'i Alexander Jansson